Marii Finfinnee: Humnootiin waraanaa Suudaan Kibbaa waraana dhaabuuf waliigalteee mallatteessan - BBC News Afaan Oromoo
Marii Finfinnee: Humnootiin waraanaa Suudaan Kibbaa waraana dhaabuuf waliigalteee mallatteessan
Humnootiin waraanaa Suudaan Kibbaa waraana dhaabuuf waliigalteee mallatteessan.
Gareewwan waraanaa Suudaan Kibbaa jalqaba bara haaraa isaanitii kaasee waraana dhaabuuf walii galtee malleettesssan.
Waliigalteen kunis kan mallattaa'ee erga mariin guyyootaaf magaalaa gudditti Itoophiyaa Finfinneetti taasifameen booda yoo ta'u, innis biyyaa waraanaan hubamtee keessatti deegarsa namoomaa taasisuuf ni dandeessisa jedhamee amanama.
Walwaraansa Suudaan Kibbaatti waggoota afran darbaniif gaggeefamaa tureenis, lammiileen biyyattii kumaatama hedduu kan du'an yoo ta'u, kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman ammo kan buqqaafamaniifi baqatan ta'uu ragaaleen ni mul'isu.
Walii galtee nageenyaa bara 2015 mallattaa'ee ture hojiirra oolchuuf mariin humnooti siyaasaa biyyattii Finfinneetti mari'ataa jiran haala gaariin deema turuu isaa ilaalchisuun ibsi Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Kamiisa darbe kenne gabaasuun keenya ni yaadatama.
Akka dubbi himaan ministeerichaa Obbo Mallas Alam, marii miilanaa mariisisaa kan jiran ministirooti haaja alaa biyyoota miseensa IGAD, humnoota siyaasaa, waldaalee hawaasaa fi qaamolee dhimmichi ilaallatu hunda mariisisanii yaadni isaanii marii ammaa kana keessatti akka hammatamu ta'eera jedhu.
Mariin kunis biyyattii keessatti nageenya mirkaneessuufi dararaa lammiilee biyyattii irra gaha jiru goolabuuf boqonnaa xumuraa irra gahamuu mul'isa jedhaniiru.
Erga pireezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir bara 2013 itti aanaa isaanii Riik Machaar aangoo irraa ari'anii booda walitti bu'iinsaa fi waraana keessatti kan kufte biyyattiin rakkoo hammaataa keessa jirti.
Hidhattootni gareelee adda addaa uumanii walii isaanii akkasumas loltoota mootummaa waraanaa jiru. Wal waraansa kanaanis lammiileen biyyattii kumoota hedduun lakkaa'aman ajjeefamani jiru.
Diinagdeen biyyattii miidhameera, gatiin dhibbeentaa 1000 oliin qaala'ee jira. Hojjettoonni mootummaa hedduun waggaa oliif mindaan hin kafalamneef. Lammiileen biyyattii harki tokko sadaffaan qe'ee isaanii irraa yoo buqqa'an, miliyoona lamaa ol ammo godaananii jiru akka Obbo Mallas jedhanitti.
Dararaa lammiilee biyyattii irra gahaa jiru dhaabuuf mariin kun carraa biyyattiin qabdu isa dhumaati kan jedhan Obbo Mallas, marii kanaan waliigaltee irra gahuu dhabnaan Mootummootni Gamtooman, Gamtaan Awurooppaa fi Gamtaan Afriikaa biyyattii irratti tarkaanfii dirqisiisoo fudhachuuf kutataniiru jedhan.
Haata'u maleess, mariin humnooti siyaasaatiin gaggeefamaa ture waliigaltee irra gahuun danda'ameera.